China Soft PVC Cable Winders mveliso kunye nabenzi | SJJ
Ii-Window ze-Cable ze-PVC eziluncedo ziluncedo xa ubiza ifowuni okanye ucoce indlu yakho. Zisoloko zenziwe ngumnini weSoft PVC ethambileyo ebiyelwe ngocingo ukuze kulungiswe iintambo. Sinezinto ezininzi zokubumba ezikhoyo ezinemilo entle kunye nemibala kwi-2D okanye i-3D, ezinokuthi ziprintwe okanye zikrolwe iilogo zakho ...
Ii-Window ze-Cable ze-PVC eziluncedo ziluncedo xa ubiza ifowuni okanye ucoce indlu yakho. Zisoloko zenziwe ngumnini weSoft PVC ethambileyo ebiyelwe ngocingo ukuze kulungiswe iintambo. Sinezinto ezininzi zokubumba ezikhoyo ezinemilo entle kunye nemibala kwi-2D okanye i-3D, ezinokuthi ziprintwe okanye zikrolwe iilogo zakho ngaphambili okanye ngasemva kumacala eefestile zekhebula. Abaqulunqi benza iiSoft Winds zePVC eziSoftware ukuba zinganeli nje ukuba lula kwaye zilula, kodwa zikwanika izimbo zezinto ezingaphezulu kwaye zenze iiSoft Winds zePVC zithandeke kwaye zinomtsalane.
Iifayile zeSoftware yePVC ayisiyisixhobo sokucoca igumbi lakho kuphela, kodwa nomhombiso wokunxiba umhlaba wakho. Iimpawu zakho zamkelwe ngabalinganiswa abatsha ukuchaza izimvo zakho kunye neengcinga zakho. Xa uphuma, iiFolder Cable Winders zeSoftware kulula ukuziphatha ekusetyenzisweni kwangaphandle. Iisampulu ziya kuba zilungile kwiintsuku ezisi-7 kunye nemveliso malunga neentsuku ezili-15 ~ ezingama-20. Intlawulo yomngundo isimahla kwizinto ezikhoyo, kunye nentlawulo encinci yokubumba yoyilo olutsha. Ngumbono olungileyo ukusebenzisa iiServer zePVC zePVC kunye neZiphathi xa ucoce amagumbi akho, okanye ucoce iibhegi zakho ukunqanda nakuphi na ukungcola.
Ukugqiba: Zonke iintlobo zeemilo, iiLogo zinokuprintwa, zibhalwe, i-Laser ikrolwe kwaye ke akukho
Ukhetho oluQhotyoshelweyo oluqhelekileyo: Intambo yentsimbi ibethelelwe kunye nabanye
Egqithileyo Iibhanti zeWristb & Iisongo eziThambileyo
Okulandelayo: IiCoasters zePVC ezithambileyo
Keychains nentlaka eyenziweyo